leveling rihitra tena tompony batch - Shanghai Marina Chem. Co., Ltd
Product Description Self-leveling Kamban-teny batch mahafehy izany no tena ampiasaina ho an'ny tena-leveling Kamban-teny, ny karazana samy hafa firenena maina-powdery fitaovana izay ahitana redispersible polymer vovoka, ary ny sasany cellulose ethers surfactant sy ny mpanao trano. Ny vokatra efa ampy notsapaina ny naka fanahy tany an-tsena, dia nahazo laza tsara noho ny mpampiasa. Amin'ny ankapobeny, ny iray kitapo (25kg)-tena mahafehy batch leveling Kamban-teny dia afaka mamokatra amin'ny ...
Supply Fahaizana: 10000 Ton / Taona
Self-leveling Kamban-teny batch mahafehy
izany no tena ampiasaina amin'ny tena-leveling Kamban-teny, ny karazana samy hafa firenena maina-powdery fitaovana izay ahitana redispersible polymer vovoka, ary ny sasany cellulose ethers surfactant sy ny mpanao trano. Ny vokatra efa ampy notsapaina ny naka fanahy tany an-tsena, dia nahazo laza tsara noho ny mpampiasa.
Amin'ny ankapobeny, ny iray kitapo (25kg)-tena leveling Kamban-teny batch tompony dia afaka mamokatra iray taonina-tena leveling rihitra.
Mora ny fandidiana sy ny formular tena ara-tsiansa.
Fonosana sy Storage
A. Standard fonosana: Ao anaty kitapo taratasy 25kg amin'ny PE kitapo
B. Big Bag na hafa dia azo atao fonosana manokana ny fangatahana.
Store izany amin'ny toe-javatra maina, ary ny fitehirizana ny fotoana tsy tokony hihoatra ny herintaona.
Ny daty etsy ambony dia araka ny fahalalana, nefa tsy hanafaka ilay mpanjifa tsara manamarina izany rehetra izany avy hatrany amin'ny fandraisana. Mba hisorohana ny hafa sy ny samy hafa rijan akora dia iangaviako ianao hanao bebe kokoa fitiliana alohan'ny fampiasana azy io. Isika hitehirizany ny zo handika ny didiko sy ny vokatra tsy nampahafantatra mialoha.
Previous: Industrial kilasy HPMC
Manaraka: Pharma kilasy HPMC
Master Batch Supplier Shina
rihitra Master Batch
tena Leveling Kamban-teny Master Batch
-tena Leveling Compoun DS Master Batch Factroy
tena Leveling Kamban-teny Master Batch Manufacturer
Tsy ny fitadiavana Kamban-teny Leveling Master Batch Price
-tena Leveling feta Master Batch
-tena Leveling feta Master Batch Factory
tena Leveling feta Master Batch Manufacturer
Pharma kilasy Ethyl Cellulose (EC)